Daadadka | Saadaasha Shabakadda
Saameynta ugu daran ee roobabku waa daadadka, tan iyo markii ay ka qaadaan wax kasta oo jidkooda ku jira. Geedaha, guryaha, waddooyinka iyo dheer iwm. Sababtaas awgeed, ifafaalehan dabiiciga ah waa mid ka mid ah waxyaabaha bulshada aad looga baqo, maaddaama oo biyaha ay dhex maraan ay xoog ku burburiyaan.
Goobtan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo la xiriira daadadka taasi oo mararka qaar saameyn ku yeelata guud ahaan dadka iyo magaalooyinka. Saacada ugu dambeysa marka laga hadlayo masiibooyinka noocan ah adduunka oo dhan. Xogta, waxyeelada iyo dadka maqan si ay kuugu wargeliyaan wax kasta oo saameynaya goob kasta oo gaar ah.
by Jarmal Portillo samee 1 toddobaad .
Daadadka ka socda Jarmalka ayaa hareeyay dhammaan wararka maanta. Mana ahan wax ka yar ...
Waa maxay daadadku?
by Monica Sanchez samee 3 sano .
Roobku waa, meelo badan oo adduunka ah, aad baa loo soo dhoweeyaa, laakiin markii biyuhu ku soo dhacaan xoog weyn ama inta lagu jiro ...
Daadadka ayaa halis gelin doona malaayiin qof 25 sano gudahood
by Monica Sanchez samee 4 sano .
Daadadku waa astaamaha saadaasha hawada oo ay tahay inaan ula qabsanno. Sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay joornaalka Science ...
Sidee ayey u samaysmaan Sunaamis maxaana inala gudboon?
Waxaan maqalnay tsunamis marar badan. Kuwani waa hirar dhulgariir oo ka dhashay taxane mowjado waaweyn oo ka imanaya ...
Duufaanta waxay ka tagaysaa khasaarooyin fara badan iyo laba dhimasho Murcia iyo Alicante
Roobabka iyo dabaysha saameyneysa dhammaan koonfur-bari ee Jasiiradda Iberia iyo Jasiiradaha Balearic ...
SAWIRRADA IYO MUUQAALKA: Duufaanta roobka wata ee musiibooyinka ka dhalisa Spain
by Monica Sanchez samee 5 sano .
Shalay waxay ahayd maalin aanaan si fudud u ilaabi doonin. Roobab ka badan 120l / m2 ayaa ka tagay waddooyin badan oo ku yaal koonfur-bari ...
Kordhinta xoojinta si looga fogaado saameynta daadadka
Andalus waxaa saameeyay daadad aad uxun sababtoo ah roobab culus oo daba dheeraaday maalmihii lasoo dhaafay. Sidaa darteed waa…
Burbur badan iyo daadgureyn roobab culus awgood
Marka la eego saadaasha saadaasha hawada ee la sameeyay maalmihii la soo dhaafay, kow iyo toban gobol oo Isbaanish ah ayay ka digeen kuwa xoogga ...
by Monica Sanchez samee 6 sano .
Waxaa laga yaabaa inaad tagtay meel uu daad ka jiray. Meesha aan ku noolahay Nofeembar 2013 waxaan ...